Waterfox, yekukurumidza Firefox uye rutsigiro rwekare maAddon | Linux Vakapindwa muropa
Waterfox, forogo yeFirefox iyo inovimbisa yakakura kumhanyisa uye kutsigira kwekare ekuwedzera
Mazhinji emabhurawuza ewebhu kunze uko anobva paChromium. Vashoma vanoponeswa uye kumusoro kwevanopokana tine Apple's Safari kana Mozilla's Firefox. Asi iyo software yakavhurika sosi inotibvumidza isu kugadzira izvo zvinozivikanwa se "Forks" yacho, uye ndizvo chaizvo Waterfox- Forogo yeFirefox yakagadzirirwa, pakati pezvimwe zvinhu, kushanda pamakomputa ine zviwanikwa zvishoma.
Firefox yagadzirisa zvakawanda mushanduro dzichangoburwa, asi dzimwe nguva izvi zvinorevawo kuti vaifanira kudzikira huremu. Pakati peballast yakaburitswa tine zvimwe zvinowedzera, izvo zvisina kusimba kana tikasashandisa chero eaya asingachatsigirwe asi zvinogona kuva dambudziko kana vabvisa imwe yatinovimba nayo. Kana iri riri dambudziko kwauri, Waterfox anovimbisa kutsigira kwe "Nhaka" yekuwedzera, ndiko kuti, zvekare izvo izvo zvepamutemo Firefox hazvichatsigire.
Waterfox inoita kuti iwe urambe uchishandisa zvekare zvekare
SaFirefox, Waterfox inoisawo kukosha kukuru pa wega. Chaizvoizvo, hazvirevi kuti ivo vanosanganisira mabasa matsva mupfungwa iyi, asi ivo vakasiya nekukanganisa kwese kuvandudzwa kwakavanzika kwakaiswa mubrowser yeMozilla mushanduro dzazvino. Kana yekupedzisira, nekuti Waterfox haisati yasanganisira nyowani nyowani senge crypto migodhi software ichivharira uye zveminwe.
Izvo Waterfox zvinoramba zvichipa uye zvikonzero zvekuishandisa ndizvo zvinotevera:
Inotsigira NPAPI plugins.
Inotsigira Bootstrap yekuwedzera.
Inopa akapatsanurwa edhisheni yenhaka yekuwedzera rutsigiro uye yemazuva ano WebExtension rutsigiro.
Muchinjikwa-chikuva rutsigiro (Windows, Linux uye macOS).
Akatsigirwa akachengetedzwa plugins.
Kana iwe uchifarira kuyedza Watefox, unogona kudhawunirodha imwe yeayo maviri mavhezheni kubva Iyi link. Shanduro dziripo ndedze Yakasarudzika uye Yazvino uye ese ari maviri anogona kushandiswa kurodha pasi mabhinari, kusunungura zip kurodha pasi faira uye kuuraya (peta-peta) "waterfox". Kunge shanduro dzebhinari dzeFirefox, Waterfox inozo gadziridza otomatiki kubva mukati mebrowser yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Waterfox, forogo yeFirefox iyo inovimbisa yakakura kumhanyisa uye kutsigira kwekare ekuwedzera
Mhoro. Zvakanaka, ndidaidze kuti paranoid asi izvo zvinotyisa, handiti? Kuziva kuti Firefox yabvisa kuwedzeredzwa kwakawanda kunofanirwa kuve nekuti havana kuchengetedzeka uye ikozvino tava navo mubrowser iyi handizive zvekutaura. Kune rimwe divi, kana vakadaro, imhaka yekuti vanogona kuvimbwa. Tichafanirwa kuyedza. Kwaziso
Iyo itsva vhezheni yeMX Linux 19.1 inosvika neKernel 5.4, inogadziridza uye nezvimwe
Maitiro ekuisa Resident Evil 5 paLinux? uye maitiro ekugadzirisa matambudziko nemutambo